I-Huawei Mate 10 Lite, udidi oluphakathi luqinisiwe ngetheminali eneekhamera ezi-4 | Iindaba zeGajethi
Kutshanje iimodeli ezimbini eziza kulawula phezulu kwikhathalogu yeHuawei: I-Huawei Mate 10 kunye neHuawei Mate 10 Pro. Nangona kunjalo, kuyaziwa ukuba inkampani yaseTshayina ifezekisa iziphumo zentengiso ezilungileyo phakathi kuluhlu. Ngaphandle kokuqhubeka, Kunyaka ophelileyo eyona nto ithengiswa kakhulu eSpain yayiyiHuawei P8 Lite. Ngoku olu luhlu lwe "Lite" lukhula ngesiphelo esitsha, kodwa lube novithamini ngakumbi kunesiqhelo. Imalunga nayo Huawei Mate 10 Lite.
Le fowuni inesikrini esivulekile. Idayagonal ifikelela kwi 5,9 intshi kwaye isisombululo sayo sifikelela kwii-pixels ezingama-2.160 x 1.080; Oko kukuthi, isisombululo esipheleleyo seHD +. Ngokunjalo umphambili wayo wenziwa ngokupheleleyo siscreen; akukho maqhosha kunye ne-logo yelogo kuphela emazantsi.
Okwangoku, ngasemva siya kufumana umfundi ofunda iminwe kunye ifoto yekhamera egcina iisenzi ezimbini: inzwa ye-16-megapixel kunye ne-2-megapixel sensor. Ngale nto siza kufezekisa iziphumo kwisitayile esicocekileyo se-bokeh; Oko kukuthi, ukungaboni kakuhle kwemizobo esiyenzayo. Kodwa lumka, kuba ngaphambili kuye kwagqitywa ekubeni kubekwe ikhamera enenzwa ephindwe kabini. Kule meko siza kujongana ne-13 kunye ne-2 ye-megapixel sensor.
Malunga namandla ale Huawei Mate 10 Lite, iibhendi zohlobo lwaseTshayina kwiprosesa yasekhaya: I-Kirin 659 8-core kunye nokusebenza rhoqo kwe-2,36 GHz. I-chip ihamba kunye ne-4 GB RAM. Ngelixa isithuba sokugcina iifayile singama-64 GB. Kwaye ungasebenzisa amakhadi ememori kwifomathi ye-MicroSD (ukuya kuthi ga kwi-256 GB).
Ekugqibeleni, i IHuawei Mate 10 Lite siselfowuni esineSIM slot ezimbini. Iyakwazi ukunxibelelana neenethiwekhi ze-4G zesizukulwana esilandelayo. Ine-WiFi, ukusetyenziswa kweBluetooth kunye nonxibelelwano lweNFC. Ngokuphathelele kuhlobo lwe-Android efakiweyo, kufuneka sibuyele kwi-Android 7.0 Nougat-abayikhethi i-Android Oreo njengomgangatho. Kananjalo, ibhetri yayo zii-3.340 milliamps ekulindeleke ukuba ikwazi ukufumana ngokwaneleyo ekupheleni kosuku ngaphandle kokungena kwiplagi. Ixabiso layo ngu 349 euro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-Huawei Mate 10 Lite, ibanga eliphakathi liqinisiwe kunye ne-terminal eneekhamera ezi-4